Sisiphi isimbo esi sinikwa ngumtya kwi-Apple Watch yakho | Ndisuka mac
Saphinda sanikezela elinye lamanqaku ethu ukuba sikubonise isitayile esitsha somtya we-Apple Watch leyo, inyaniso, siyifumana intle kakhulu kwaye iyimpumelelo. Kungumxube phakathi kwento eya kuba sisitayile somtya waseMilanese ecaleni kwentambo yentsimbi eyenziwe ngamakhonkco afana naleyo ithengiswayo ngu-Apple.
Umxube onika isitayile esahlukileyo kweyakho Apple Watch, ngakumbi nangakumbi xa ithengiswa phakathi kweetoni ukuba ikwazi ukufumana eyona ilungele iApple Watch oyithengileyo.
Umtya wenziwe ngentsimbi ngemibala emithathu eyahlukeneyo, isilivere, isithuba esimnyama-mnyama kwaye yenyuka ngegolide. Njengoko ubona kwimifanekiso, unxibelelwano neApple Watch yeyona Apple inelungelo lobunikazi ngelo xesha kwaye ilungelelaniswe kwimilimitha enye, ke ngekhe ubenangxaki onokuthi uphume ekubukeni.
Isikrufu esincinci sibekwe ngaphakathi kwinxalenye yeMilanese, yiyo loo nto igcina ibhendi iqhotyoshelwe kwikona yokujonga.
Inxalenye yeMilanesa enale ntambo yinxalenye edityaniswe nomzimba wewotshi ngelixa icandelo le-clasp lelo liyilelwe ngamakhonkco. Ukuba ufuna ukubona okungakumbi malunga nayo, kuya kufuneka undwendwele eli khonkco lilandelayo. Ixabiso li-euro ezingama-11,80. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba ubeka le strap kwi-Apple Watch yakho, uya kuba newotshi enesitayile abaninzi abangazange bayibone ngaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Sisiphi isitayile esisixhanti esinika iApple Watch yakho
Uthi le nxalenye yeMilanesa ibanjwe ngesikrufu.
Ikopi ebiza ixabiso eliphantsi kunye nelithambileyo yomtya wase-Milanese. Uya kwi-eBay kwaye uya kubona amakhulu eemodeli ze-chonis ezinje.